Olee otú kpamkpam ehichapụkwa gị Android ekwentị n
Ị na-atụ anya na-ere gị Android ekwentị ịzụta ekwentị ọzọ? Ma ọ bụ nnọọ na ị chọrọ akụpịa ekwentị. Tupu ị n'ihu na gị ndokwa nke na-ere gị ugbu android ekwentị, unu kwesịrị ịbụ nnọọ n'aka na ị ihichapu gị onwe gị ozi site na ekwentị. Nke a dị mkpa ebe ị na-amaghị ekwentị ga-ejedebe ma ọ bụ ndị ekwentị ga-ejedebe na. Ebe a bụ otu isiokwu na kasị mma na-egosi otú kpam kpam ehichapụkwa gị Android ekwentị n'iji abụọ dị iche usoro. Mbụ usoro bụ site ụlọ ọrụ mmepụta ihe resetting gị Android ekwentị na abụọ usoro bụ site na iji Wondershare MobileTrans.
Hichapụ niile data site Factory Tọgharia
Factory nrụpụta bụ ngwaahịa weghachi nke ọ bụla electronic gadget ka ya pụrụ iche kpuchie ya. Nke a na-enyo ekwentị akpasarade ala site ihichapụ ka ukwuu akụkụ nke data dị na gadget agbalị iji weghachi gadget ka ya pụrụ iche emeputa ntọala. Ma tupu Iweghachi gị factory ọnọdụ; ị kwesịrị ị na encrypt ngwaọrụ gị.
Android ọrụ nwere ike na-eche na ha onwe onye ọmụma e n'enweghị kpochapụla na a factory nrụpụta, ma nke ahụ abụghị eziokwu. Izo ya ezo usoro ga scramble ihe ọmụma na ngwaọrụ gị na, n'agbanyeghị na o na ehichapụkwa adịghị kpamkpam ihichapu ọmụma; a pụrụ iche isi ga-ụgwọ unscramble ya.
Encrypt gị gam akporo ngwaọrụ, eso ndị a.
Nzọụkwụ 1: Site gị Android menu, na-emeghe Ntọala na ngwa na gbadaa na Nche. Enweta na-emeghe Security ntọala.
Nzọụkwụ 2: N'okpuru izo ya ezo menu, họrọ "encrypt ngwaọrụ" ma mee ya.
Ị ga-achọ iji jide n'aka na ekwentị gị na-plugged na ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu ebubo n'oge izo ya ezo usoro, nke na-ewe gburugburu otu awa iji wuchaa dabere na ego nke data echekwara na ekwentị. Nkume ekwentị gị na mgbe izo ya ezo a na-nyeere. Ozugbo usoro na-okokụre, na-emeghe Ntọala ọzọ na ego ahụ ma ọ bụrụ e nwere ihe "ezoro ezo" baajị n'okpuru ekwentị nchekwa izo ya ezo nhọrọ.
Mgbe encrypting ekwentị gị, ị nwere ike ugbu ọganihu ruo nzọụkwụ ọzọ nke bụ "Iweghachi na ngwaọrụ gị factory mwube". Ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu ka Iweghachi factory mwube nke ihe gam akporo ngwaọrụ;
Nzọụkwụ 1: Site na Ihuenyo, pịa NchNhr button na-aga Ntọala.
Nzọụkwụ 2: Gaa na taabụ "Izugbe" ma họrọ "ndabere na tọgharịa".
Nzọụkwụ 3: Họrọ "Factory data nrụpụta" nhọrọ na ala. a
Nzọụkwụ 4: Kpatụ "Tọgharia ngwaọrụ" na ala nke ihuenyo.
Usoro nwere ike iri a ole na ole oge, ma ekwentị ga-emecha reboot na-arịọ gị maka nzere gị.
Hichapụ niile data iji Wondershare SafeEraser
Factory nrụpụta bụ ahụkarị atụmatụ ị presumably ahu nagide mgbe ị kwesịrị inye ma ọ bụ na-ere gị ochie Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. I chere na ị ehichapụkwa ihe niile na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba site na-eme a Factory tọgharịa Otú ọ dị, ọ bụghị ihe ezi. Factory nrụpụta adịghị hichapụ ihe niile ozi na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọzọ jogburu onwe ka, ozi ọ erases bụ inyeaka megide ụfọdụ data mgbake ngwaọrụ na ike-natara effortlessly. Iji hichapụ Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba kpam kpam na ruo mgbe ebighị ebi, ndị kasị mma mkpebi bụ ise nkwado si ọkachamara Android wiping software dị ka Wondershare SafeEraser.
Wondershare SafeEraser bụ oké ngwá ọrụ nke na-enyere gị aka ehichapụkwa ihe niile na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ dịghị ihe dị recoverable n'adịghị Iweghachi factory ọnọdụ. Wondershare SafeEraser bụ ezigbo Android & iOS ngwaọrụ "ihichapu" ngwa e mere iji na-adịgide adịgide ehichapụkwa onwe onye nile ọmụma si ngwaọrụ iji US Military spec n'elu-ede technology ijere data unrecoverable; alọta na ngwaọrụ a "dị ọcha wepụrụ ebubo" ala n'ihu gị resell, inye ma ọ bụ ahia ya.
Olee otú ehichapụkwa Android ekwentị na Wondershare SaefeEraser
Nzọụkwụ 1: Open Wondershare SafeEraser na jikọọ na Android ekwentị na kọmputa na ihe eriri USB. Biko jide n'aka na ị nyeere USB Debugging mode na ekwentị. Mgbe njikọ, usoro ihe omume ga-egosipụta dị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ 2: Pịa na ihichapu niile Data na usoro. Mgbe ahụ na-eso ntụziaka ịbanye "Hichapụ" iji gosi na iji. Pịa na ihichapu Ugbu a ime na.
Nzọụkwụ 3: Mgbe usoro ihe omume ga-amalite erasing ọdịnaya niile na ekwentị gị, gụnyere kọntaktị, videos, photos, music, ngwa ọdịnala, wdg
Nzọụkwụ 4: Mgbe erasing usoro okokụre, enweta na Factory Data Tọgharia ma ọ bụ Ihichapu ọdịnaya niile na ekwentị na-ehichapụ niile usoro ntọala. Mgbe ahụ ekwentị gị ga-kpamkpam kpochapụrụ.
Ebe a bụ ole na ole ọzọ nnọọ uru Atụmatụ na ihe unu ga-eme tupu ere ma ọ bụ enye efep gị ochie Android ngwaọrụ.
Ndabere gị data na mwube na gị na Google akaụntụ - Nke a pụrụ ịbụ lifesaver mgbe oge na-abịa. Ịmepụta ndabere na gị na kọmputa bụ mgbe niile mma; Otú ọ dị, mgbe ị na-ịmepụta ndabere gị Android ngwaọrụ na a Google akaụntụ, ọ na-enye gị ike nke agagharị agagharị. I nwekwara ike ndabere gị data na atọ ọzọ android ndabere ngwaọrụ. Ị nwere ike mgbe weghachite gị niile data na onye ntọala site na iji ọ bụla na kọmputa. Ị kwesịrị ị na-azọpụta niile data na-eme na ngwa, kọntaktsị, kalinda, Gmail, Google Drive akwụkwọ, nchọgharị na weebụ ibe edokọbara, ghara ichefu Google+ photos na ndị ọzọ.
Ndabere foto na vidiyo na - Dropbox, Flickr, na Microsoft OneDrive niile magburu onwe nhọrọ maka gị ịzọpụta gị niile foto na vidiyo na i nwere na gị android ngwaọrụ. N'ezie, ruo Photos, Flickr ọbụna na-enye gị a humongous ohere nke 1TB. Ntak-eme ka ojiji nke ya mgbe ahụ, good.
Back gị odide na akpọ akụkọ ihe mere - banyere adịkwa si ​​na niile gị ozi na akpọ akụkọ ihe mere, ọ dịghị mkpa a ga-nchegbu dị ka ị pụrụ ugbu a na-eji a magburu onwe free software akpọ SMS ndabere + na ị nwere ike ibudata site Google Play Echekwala. Ọ ga-azọpụta niile ederede na oku na ndekọ na a nchekwa na gị Gmail akaụntụ.
Gbanyụọ Reactivation mkpọchi - Nke a na otu onye bụ a dị nnọọ mkpa nzọụkwụ. Ị kwesịrị ị na gbanyụọ Reactivation mkpọchi bụrụ na ị ama debe ya n'ihu site na ịga na Ntọala> Nche> na unchecking na Reactivation mkpọchi n'ebe ahụ.
Olee otú Ofụri Esịt Ihichapu SD Kaadị na android ekwentị
> Resource> ihichapu> Olee otú iji kpamkpam Hichapụ Your akporo ekwentị